Yakatangisa tirera yemwaka wechipiri we "Ona" iyo inotanga kuratidzwa muna Nyamavhuvhu 27 | IPhone nhau
Takaburitsa turera yemwaka wechipiri we "Ona" iyo inotanga kuratidzwa muna Nyamavhuvhu 27
Ngatiendei nezvikamu nenhau dzenhepfenyuro «ona»Izvo zvakakunda pakuratidzwa kweiyo Apple TV + chikuva. Chekutanga ndechekuti isu tatova nezuva rekuburitsa mwaka wechipiri. Yechipiri, kuti isu tinogona kutoona turera yeiyi nyowani kuunganidzwa kwezvikamu.
Uye chechitatu, iyo Apple yakasimbisawo kuti a chikamu chechitatu. Saka nerombo rakanaka, tinovimbiswa mimwe mwaka miviri yekuona dzino dzakateerana dzakabudirira. Bravo.
Kusiyana-siyana achangobva kuzivisa kuti Apple yasimbisa kuti mwaka wechipiri wenyaya dzakakurumbira dzakateerana "Ona" inotarisisa Jason Momoa ichaonekwa August 27, nezvikamu zvitsva zvinozotanga kuratidzwa Chishanu choga choga.
Apple yakasimbisawo muchirevo chimwe chete kuti vakatosaina kuvandudzwa pamwe nemugadziri we mwaka wechitatu. saka pari zvino, pachave nemwaka mitatu iyo ichaita iyo yakazara yeakateedzana.
Pasina kupokana, "Ona" yaive budiriro huru, ichiva mureza we Apple TV + mukutanga kwawo. Zvirokwazvo yaive yekutanga nhevedzano yakaonekwa nevakanyorera kuchikuva kubva payakatanga, kumashure munaNovember 2019.
"Ona" nyeredzi Jason Momoa, Alfre Woodard naDave Bautista kuburikidza nemutambo wepashure-apocalyptic apo hutachiona hwauraya ruzhinji rwevanhu, zvichisiya varume, vakadzi nevana vachiri vapenyu.
Apple zvakare ichangoburitsa iyo tirera promo yemwaka wechipiri, ichatanga kuratidzwa muna Nyamavhuvhu 27.
Pamwe nemamwe maApple TV + akateedzana akadai se «The Morning Show»Uye«Ted lasso«, Pasina kupokana« Ona »anga ari mumwe weanonyanya kufarirwa muApple vhidhiyo chikuva.
Izvo zvave kutove zvakajairika kuona kuti sei ese epakutanga akateedzana e Apple TV + izvo zvatoonekwa papuratifomu, vari kutora mifananidzo kana kuratidzira mwaka wechipiri newechitatu, uye "Ona" haigone kushoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Takaburitsa turera yemwaka wechipiri we "Ona" iyo inotanga kuratidzwa muna Nyamavhuvhu 27
Apple inogadzirisazve vhidhiyo mutambo mutambo weiyo iOS 15
Bhatiri bvunzo pakati peIOS 14.6 uye iOS 15 beta 1